Vorondolo Iray Mandà Tsy Mety Miala Ao Anatin’ny Parlemanta Tanzaniana. Inona Daholo No Dikan’izany? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Febroary 2019 5:00 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, Français, Ελληνικά, Swahili, Yorùbá, English
‘’Fambara ratsy?’’ hoy ny The East African, gazetim-paritra mpiseho isan-kerinandro.
Taty aoriana kely, nandrafitra an-tsary ny zava-nisy ilay Tanzaniana iray mpanao sary, Samuel Mwamkinga (Joune) tamin'ny alalan'ny fanondroana filaza britanika manao hoe ny “andiam-borondolo iray” miainga amin'ny fijery Grika milaza fa hendry ny vorondolo (sary fanaingoana nahazoana alalana).
Ny vorondolo, anefa, dia raisina ho toy ny fambara fahafatesana sy loza ao Tanzania.
Zava- mahazatra loatra ao Tanzania ireo vorondolo, indrindra koa fa ny fironan'ireo Tanzaniana amin'ny finoanoam-poana. Tamin'ny taona 2010, fanadihadiana iray no nampahatsiahy fa ny 93% amin'ireo Tanzaniana dia mino ny mosavy.
Tafiiditra tao anaty tantara i Tanzania tamin'ny taona 1992 noho izy iray amin'ireo firenena voalohany ao Afrika nametraka ny rafitra antoko maro izay manome vàhana ireo antoko mpanohitra. Ny lalàna mikasika ireo antoko politika (eto miaraka amin'ireo fanitsiana novolavolaina) dia nampidirina ihany koa tamin'ny taona 1992 ary novàna araka ny fotoana, tamin'ny taona 2009 no nanovàna azy farany.
Fehiny, ny fanovàna ny lalàna dia manome fahefana betsaka kokoa ho an'ny mpitantsoratra voatondron'ny governemanta, tsy hoe fotsiny hanafoana ny fandraketana an'ireo antoko politika, fa koa famaizana amin'ny endrika fanagadrana raha toa ny antoko politika iray, ohatra, ka manatontosa fanabeazana ara-piarahamonina mifandraika mifandraika amin'ny fanoratana ireo hetsika hafa manana loko politika, araka ny voalazan'ny Reuters.
Maro ireo media nitanisa an'i Zitto Kabwe, filohan'ny antoko mpanohitra ACT-Wazalendo, izay efa tamin'ny volana aogositra 2017, no nitsikera ilay volavola fanovàna ny lalàna, nahatsinjo fa mety ho voatohintohina ireo zo ara-politika. Nampitahain'i Kabwe tamin'ilay volavolan-dalàna 2016 momba ireo tolotra media izy io, izay namerina an'ireo media malalaka sy tsy miankina. Ankehitriny, sarihan'i Kabwe ny saina ho any amin'ny fifanoheran-kevitra naterak'ilay fanovàna ny lalàna momba ireo antoko politika.
Tato anatin'ny taona vitsivitsy, nitodik tamin'ny fanatsofohana didy jadona ho ao anatin'ny lalàny i Tanzania, niteraka fihenan'ny toerana ho an'ireo mpanohitra ara-politika mpaneho hevitra sy ireo media tsy miankina. Amin'izao fotoana izao, milaza ireo mpitsikera fa ilay lalàna novàna mikasika ireo antoko politika dia manasarotra kokoa ny fanaovana politika mitsikera ny filoham-pirenena sy Chama Cha Mapinduzi (Ny antokon'ny revolisiona), eo amin'ny fitondrana hatramin'ny Fahaleovantena tamin'ny taona 1961.
Tao anatinà bitsika 15, i Rachel McLellan mpianatra iray manomana ‘doctorat’ , no nampiseho tamin'ireo mpifidy ny vokatra mety hitranga aterak'ilay lalàna vaovao ary mamaritra ny toedraharaha izay hampihitsoka ny mpanohitra :
“Ry mpikambana hajaina ao amin'ny Parlemanta , hatramin'ny maraina no efa hitanay tao anaty Efitrano ilay vorondolo saingy, ao anatin'ny fomban'ireo mponina ao Dodoma, tsy misy fiantraikany amin'ny olombelona ny vorondolo hita amin'ny andro antoandro. Midika izany fa tsy misy atahorantsika ny fisiany.”